Podcasts for English Language Learners by Daw Haymar Maung - Myanmar Network
Podcasts for English Language Learners by Daw Haymar Maung
Posted by Myanmar Network on January 25, 2012 at 9:47 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခု podcast အစီအစဉ်တွင် ဆရာမဒေါ်ဟေမာမောင်မှ လူအများမှားလေ့ရှိသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းအမှားများကို ထောက်ပြသွားပြီး မည်သို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုရေးသားရမည်ကို ပြောပြသွားပါသည်။
ဆရာမ၏ ယခင် podcast များကိုလည်း အောက်တွင်ရယူနိုင်ပြီး podcast များနှင့်ပါတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်များကိုလည်း ရေးသားနိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များ၏ အကြံပြုရေးသားချက်များကို ဆရာမထံသို့ပို့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Previous Podcasts by Daw Haymar Maung
Podcast များနှင့်ပါတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်များကို အောက်တွင်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များ၏ အကြံပြုရေးသားချက်များကို ဆရာမထံသို့ပို့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Other podcasts for IELTS candidates
IELTS Seminar by Daw Hay Mar Maung
IELTS Tips by Ko Htoo Zin Oo
IELTS Tips by Ko Phyo Hein Kyaw
IELTS Tips by Ma Htoo Htet Htet Kyaw
IELTS Tips by Chan Nyein
IELTS Reading: Improve your English and prepare for IELTS Reading
IELTS Vocabulary - Improve English & prepare for IELTS Writing
IELTS Writing - Coherence & Cohesion - Improve your English &am...
Road to IELTS - Online preparation and practice for IELTS candidates
IELTS Scholarship 2014
IELTS Test and Registration Dates for year 2014
Tips for IELTS Candidates
194 members like this
Permalink Reply by Kyin Kyin May on April 9, 2012 at 9:01
Here is script for Thingyan, Water Festival.
Postcasts for english language learners by Daw Haymar Maung.pdf, 97 KB
Permalink Reply by Zaw Win on April 9, 2012 at 11:07
I am Zaw Win and one of the students of you. I would like to learn Spoken English with teacher in weekend... not only me but also with my three daughters. Could you help me, teacher? I amacivil engineer and project manager of Engineering Company so I need to speak English fluently with foreigners. But I cannot speak well. As we know, Speaking learns by speaking. There's no other way. Thus if you could havealeisure time to teach me, please kindly contact me, 09-6300965.
I wish you happiness and prosperity in Myanmar Happy New Year.
Permalink Reply by Thu Thu(Ever Smile) on April 10, 2012 at 13:14
သမီးရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းမှန်မမှန် သိချင်ပါတယ် ဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲဖြေပေးပါ ဆရာမ
Q&A tab လိုမျိုးရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်
Permalink Reply by Thi Nwe Cho on April 11, 2012 at 15:36
Thank you for your kind guidance to younger generation , it is absolutely true !!
Permalink Reply by waiphyomaung5 on April 15, 2012 at 17:58
You always provide us the invaluable knowledge and you're very reliable .I appretiate every words of yours and respect you always. And I'd like to be one of your students.If you have the language classes besides BC, I'd like to get the Address & Fees of those.
May You Live Long !!!
Permalink Reply by Nang Nang on April 18, 2012 at 14:21
Permalink Reply by 2emiupb2avp3f on April 22, 2012 at 7:37
ဆရာမ ကျနော် ဆရာမကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော် ခံစားချက်တွေနှင့် နွေးထွေးစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့
အိမ်ကလေးကိုပေါ့ ။ လာလည်ပါနော် ဆရာမ ။ ဆရာမအတွက် အကျိုးမယုတ်စေရပါဘူး ။ ကျနော်
ဟင်း ကောင်းကောင်းချက်တတ်ပါတယ် ဆရာမ ။
Permalink Reply by 22v5b2baut2f8 on April 24, 2012 at 21:19
ဆရာမရဲ့ How to improve Your English at Leisure podcast ကို မြန်မာစာ နဲ့ရော English နဲ့တင်တာရော အသံဖိုင်ကိုလည်းဘယ်နားမှာသွားရှာပြီး download လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ကျန်နော်ကိုပြောပြစေချင်ပါတယ် ကျန်နော်လိုက်ရှာမတွေ့လိုပါတီချယ် ရေးးးးးးးးးးးးးး
Permalink Reply by Wai Yan Tun on May 3, 2012 at 9:48
အခုဆရာမ Podcast ထဲမှာ IELTS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး down လို့ ရတဲ့ File နှစ်ခုရှိပါတယ် IELTS နဲ့ 
ပတ်သက်ပြီးတခြား down လို့ ရတဲ့file တွေ ဆရာမ Podcast မှာ ဆက်လက်တင်ပြပေးပါလို့ 
Permalink Reply by Wai Yan Tun on May 3, 2012 at 9:54
ကျေးဇူးပါဆရာမ လက်ရှိ podcast မှာ IELTS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး down လို့ ရတဲ့ 
ှSpeaking Test ကို Part2ထိဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ် ဆရာမ
ဆက်ပြီး IELTS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာလို့ ရတဲ့ တခြား Test တွေ ဆက်လက်
ဖော်ပြပေးပါလို့ လေးစားစွာဖြင့်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ် ဆရာမ
Permalink Reply by Than Lwin on May 24, 2012 at 5:26
What is Serial number when I download !!!
Permalink Reply by Wai Yan Tun on June 5, 2012 at 20:22
thank you very much Sayarma